Cutubyada hore waxay muujiyeen in da'da dijitaal ay abuurayso fursado cusub oo ururinta iyo falanqaynta xogta bulshada. Da'da da'da yar ayaa sidoo kale abuurtay caqabado cusub oo anshax. Hadafka cutubkan waa inaad ku siiso qalabka aad u baahan tahay si aad si xushmad leh masuuliyadahaas u xalliso.
Waxaa hadda jira xaalad aan la hubin oo ku saabsan dhaqanka habboon ee qaar ka mid ah cilmi-baarista bulshada ee digital-ka ah. Hubin la'aantani waxay keentay laba dhibaato oo la xidhiidha, mid ka mid ah ay ka heleen wax badan oo ka badan kuwa kale. Dhinaca kale, cilmi-baarayaasha qaar ayaa lagu eedeeyay inay ku xadgubaanayaan asturnaanta dadka ama kaqeybgalayaasha ka qaybgalayaasha tijaabooyinka aan caddaaladda ahayn. Xaaladahan-oo aan ku sharxi doono cutubkaan - waxay ahaayeen mawduuc dood weyn iyo wadahadal. Dhanka kale, hubin la'aanta anshaxa ayaa sidoo kale saameyn ku yeelatay, ka hortagidda cilmi-baaris anshaxeed iyo muhiim ah oo ka imanaya dhacdada, xaqiiqda ah in aan u maleynayo in wax badan la qiimeeyo. Tusaale ahaan, intii lagu jiray cudurka Ebola ee 2014, saraakiisha caafimaadka dadweynaha waxay rabeen macluumaad ku saabsan dhaqdhaqaaqa dadka ee dalalka ugu badan ee cudurka qaba si ay u caawiyaan xakamaynta cudurka. Shirkadaha taleefannada gacanta ayaa lahaa diiwaanno faahfaahsan oo la xidhiidha oo laga yaabo inay bixiyaan macluumaadkan qaar. Hase yeeshe, arrimaha la xidhiidha anshaxa iyo kan sharciga ayaa bogsiiyey cilmi-baarayaasha inay isku dayayaan inay falanqeeyaan xogta (Wesolowski et al. 2014; McDonald 2016) . Haddii aynnu nahay, bulshadu, waxay kobcin karaan xeerarka anshaxa iyo heerarka ay wadaagaan cilmi-baarayaasha iyo dadwaynaha-waxaanan u maleyneynaa inaan sidaan sameyn karno - markaa waxaan awoodnaa inaanu awood u yeelano awoodaha da'da dijitaalka ee siyaabaha masuulka uga ah iyo faa'iidada bulshada .
Mid ka mid ah caqabadaha abuuraya heerarka la wadaago ayaa ah in saynisyahanno bulsheed iyo aqoonyahanno cilmiyaysan ay u leeyihiin inay yeeshaan habab kala duwan oo lagu baaro anshaxa. Cilmi-baareyaasha bulshada, ka fekeridda anshaxa waxaa hareeraya Guddiyada Dib-u-eegista Gudaha (IRBs) iyo sharciyada ay u xilsaarayaan fulinta. Inta badan, habka kaliya ee aqoonyahanno bulsheed oo karti badan leh waxay la kulmaan dood sifo leh iyada oo loo marayo habka dhexdhexaadinta dib-u-eegista IRB. Aqoonyahanada xogta, dhinaca kale, waxay leeyihiin waayo-aragnimo nidaamsan oo leh habdhaqanka cilmi-baarista sababtoo ah si caadi ah loogama hadlin cilmiga kombiyuutarka iyo injineernimada. Midkoodna maahan hababkan - hababka ku salaysan hababka sayniska bulshada ama habka aduunka ee aqoonta cilmi-baarayaasha - waxay ku haboon tahay cilmi-baarista bulshada ee da'da digital-ka ah. Taa bedelkeeda, waxaan aaminsanahay in annagoo ah bulsho, inay horumar samayn doonto haddii aan qaadanno habraac mabaadi'da ku salaysan . Taasi waa, cilmi-baadhayaashu waa inay qiimeeyaan baaritaankooda iyada oo loo marayo shuruucda jira-taas oo aan qaadan doono sidii la bixiyey iyo in la raaco in la raaco- iyo mabaadii'da guud ee anshaxa. Habka ku salaysan mabaadiida waxay caawisaa cilmi-baarayaasha inay sameeyaan go'aammo macquul ah kiisaska xeerarka aan wali la qorin, waxayna ka caawisaa in cilmi-baadhayaashu ay ku faahfaahiyaan sababahooda midba midka kale iyo dadweynaha.
Qaabka mabaadiida ku saleysan ee aan u doodayo maaha mid cusub. Waxay soo jiidaneysaa tobannaan sano oo feker hore ah, kuwaa oo intaa ka badan lagu soo rogay laba warbixin oo muhiim ah: Warbixinta Belmont iyo Warbixinta Menlo. Sida aad u arki doonto, mararka qaarkood mabaadii ku salaysan mabda'a waxay keeneysaa in la caddaado, xalal waxqabad leh. Iyo, marka aanay u horseedi in xalalka noocan oo kale ah, waxay caddaynaysaa ganacsiyada ka qaybqaadashada, taas oo muhiim u ah in la dhimo miisaan ku habboon. Dheeraad ah, habka ku salaysan mabaadi'da ayaa ku filan guud ahaan in ay waxtar u lahaan doonto meel kasta oo aad ka shaqeyso (tusaale ahaan, jaamacad, xukuumad, NGO ama shirkad).
Cutubkan waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo baaraha shakhsi ahaaneed ee macnaha leh. Sidee u aragtaa anshaxa shaqadaada? Maxaad sameyn kartaa si aad u sameyso shaqadaada anshax badan? Qaybta 6.2, waxaan ku sharxi doonaa saddex mashaariic cilmi baaris oo da 'yar ah oo abuuray dood sifo ah. Ka dib, qaybta 6.3, waxaan ka soo bixi doonaa tusaalooyinka gaarka ah si aan u sharaxo waxa aan u malaynayo inay tahay sababta ugu weyn ee aan hubin anshaxa: si degdeg ah kor ugu kaca awoodda cilmi-baadhayaasha si ay u ilaaliyaan una tijaabiyaan dadka iyaga oo aan ogolaansho ama xitaa wacyigelin. Awoodahan ayaa badalaya sida ugu dhaqsaha badan xeerarkeena, sharciyada, iyo sharciyada. Marka xigta, qaybta 6.4, waxaan ku sharxi doonaa afar mabaadi oo hadda jira oo hagaya fekerkaaga: Ixtiraamka dadka, faa'iidada, caddaaladda, iyo ixtiraamka sharciga iyo danta guud. Ka dib, qaybta 6.5, waxaan soo koobayaa laba qaab oo habdhaqan-anshax-raadin ah iyo deontology-oo kaa caawin kara mid ka mid ah caqabadaha culus ee laga yaabo inaad la kulanto: goorma ayay kugu haboon tahay inaad isticmaasho macnaha erey macquul ah oo suurtogal ah si loo gaaro dhammaadka anshaxa ku haboon. Mabaadiidaas iyo habdhaqanka anshaxa - oo lagu soo koobay shaxda 6.1-waxay awood u siineysaa inaad ka baxdo xooga saartid waxa loo ogol yahay sharciyada hadda jira iyo in aad kordhiso kartidaada aad ugu gudbin karto sababahaaga cilmi baarayaasha kale iyo dadweynaha.
Iyadoo ay jirto asalkaas, qaybta 6.6, waxaan ka wada hadli doonaa afar degmo oo si gaar ah ugu tartamaya cilmi-baarayaasha cilmiga bulshada ee dijitaalka ah: Ogolaanshaha la wargeliyay (qaybta 6.6.1), fahamka iyo maareynta halista macluumaadka (qaybta 6.6.2), sirta (qaybta 6.6.3 ), iyo samaynta goynta anshaxa ee wajiga hubin la'aanta ah (qaybta 6.6.4). Ugu dambeyntii, qaybta 6.7, waxaan soo jeedin doonaa saddex talobixin wax ku ool ah oo ka shaqeynaya aag oo leh anshax aan la dabaqi karin. Cutubka waxaa lagu soo gabagabeynayaa faahfaahin taariikheed, oo aan si kooban u soo koobay kormeerka akhlaaqda cilmi-baarista ee Maraykanka, oo ay ku jirto khasaarihii Daraasadda Tuskegee Syphilis, Warbixinta Belmont, Sharciga Guud, iyo Warbixinta Menlo.
Jaantus 6.1: Sharciyada xukumaya cilmi-baadhista waxaa laga soo qaatay mabaadi'daha laga soo qaatay qaab-dhismeed anshax. Doodda ugu muhiimsan ee cutubkan waa in cilmi-baarayaashu ay qiimeeyaan cilmi-baaristooda iyada oo loo marayo shuruucda jira-taas oo aan qaadan doono sida la bixiyay iyo in la raaco in la raaco- iyo mabaadi'da guud ee anshaxa. Sharciga Guud waa xeerka hadda jira ee lagu maamulo cilmi-baarisyada ugu badan ee dawladda dhexe ee Maraykanka (macluumaad dheeraad ah, fiiri lifaaqan taariikheed ee cutubkan). Afarta mabda 'waxay ka yimaadaan labo xargo oo buluug ah oo loo abuuray inay bixiyaan hagid anshax oo loogu talagalay cilmi-baarayaasha: Warbixinta Belmont iyo Warbixinta Menlo (macluumaad dheeraad ah, fiiri lifaaqa taariikheed). Ugu dambeyn, natiijada iyo deontology waa nidaamyo anshaxeed oo ay soo saareen falanqeeyayaal boqolaal sano. Nidaam degdeg ah oo qallafsan oo loo kala saaro labada qaab ayaa ah in dadka cilmi-nafsiga ah diiradda saaraan habka iyo natiijooyinka ay diirada saaraan dhamaadka.